Waxaan ka imid Mac iyo iPhone Xaqiiqda oo tebinaysa dhacdadii Abriil | Waxaan ka socdaa mac
Caqli ahaan, dhammaan kooxda Soy de Mac iyo kooxda iPhone Actualidad ayaa mar kale isu roga si ay u qabtaan dhamaystiran oo toos ah uga hadlaya dhacdada Apple Talaadada soo socota, Abriil 20. In ka yar 24 saacadood dhacdadan koowaad waxay ka bilaabaneysaa Cupertino, tas-hiilaadka Apple Park oo kooxda oo dhami waxay si faahfaahsan uga hadli doonaan kanaalkayaga YouTube, shabakadaha bulshada iyo, dabcan, shabakadda.
Xaaladdan oo kale, Apple waa inay soo bandhigtaa Ipad cusub laakiin waxaa jira warar xan ah oo ku saabsan suurtagalnimada iMac cusub iyo xitaa AirTags. Tan ka sokow, waxaa sidoo kale la sheegay in rukuminta galka laga helayo barnaamijyada 'podcasts' ay imaan karto oo laga yaabo inay warar kale oo dheeri ah.
Haddii aadan rabin inaad dhaafto wax kasta oo Apple soo bandhigto, keydso meel ka mid ah ajandahaaga berri Talaado, Abriil 20 markay tahay 19:XNUMX pm gudaha Spain. Waad nala raaci kartaa dhacdada, xitaa waad ka faaloon kartaa sheekada inaan firfircoonaan ka heli doonno YouTube.
Waxaan rajo weyn ka qabnaa dhacdadan ugu horreysa ee Apple sanadka waxaana laga yaabaa inaan la kulanno waxyaabo lala yaabo. Haddii aad rabto Waqti fiican la qaad oo nala noolaw bandhigan koowaad ee sanadkan 2021 ee Apple ha ka waaban inaad badbaadiso daloolka kanaalka YouTube. Xusuusnow inaad sidoo kale kuheli doontid wararka oo dhan soydemac.com waqtigan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Waxaan ka imid Mac iyo iPhone Xaqiiqda oo tebinaysa dhacdadii Abriil